टिचिङ अस्पतालकै डा. लोहनीको टीमले जब खुट्टाको औला हातमा जोडिदिए ! « Janaboli
टिचिङ अस्पतालकै डा. लोहनीको टीमले जब खुट्टाको औला हातमा जोडिदिए !
काठमाडौ । स्वास्थ्य विज्ञानका अनौठा सफलता अब अन्र्तराष्ट्रिय जगतका मात्र हैन । नेपालमैपनि सुन्न पाईन थालेको छ । नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजञ्जले विश्वमै असम्भव जस्तो स्वास्थ्य सफलता हात पारेको छ । प्लाष्टिक सर्जन डा. ईश्वर लोहनीले खुट्टाको औला हातम जोडेर दुरुस्त जन्मजात प्राप्त औलाजस्तै बनाइदिएपछि विरामीले पाएको खुशीले यतिबेला चर्चाको शिखर चुमेको छ । एकदिन डा. लोहनी अस्पतालमै आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहन्थ्यो । हतार–हतार गर्दै दायाँ हातको कान्छि औला बाहेक सबै औला छिनालेको ठुटे हात लिएर एकजना विरामी आइपुगे । उनको काठ काट्ने आराले सबै औला टुक्रा बनाइदिएको रहेछ । टुक्रिएका औला नलिई आएकाले उनका हातमा जन्मजात आएका औला जोड्न सम्भव भएन ।
डा. लोहनीले तत्काल निर्णय लिए । दाहिने हातमा दुई वटा मात्र औला भए धेरै काम गर्न सकिने भएकाले खुट्टाको एउटा औला जोडिदिने डाक्टरले प्रस्ताव राखे । डाक्टरको प्रस्ताव विरामी र उनका आफन्तले स्वीकार गरे । चिकित्सा विज्ञानमा असम्भव जस्तै बनेको यस्तो प्रस्ताव हत्तपत्त विरामीले स्वीकार गर्दैनन् । ती विरामीले स्वीकार गरेपछि डा. लोहनीको टिमलाई सजिलो भएको थियो । त्यसपछि डा. लोहनीको टीमले खुट्टाको एउटा औला काटेर हातको बुढी औला हुनेठाँउमा जोडिदिए ।
डा. लोहनीको टीम सर्जरीमा सफल बन्यो । उनले जन्मजात प्राप्त गरेजस्तै अर्को औला पाए । घाउँ निको भएपछि बिरामीमा आएको खुशी डा. लोहनीले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन । औला प्राप्त गर्ने व्यक्तिपनि औधि खुशी छन् । अधिकांश काम आफ्नै हातले गर्न सकेका छन् । त्यसो त डा. लोहनीका लागि यो सर्जरी मात्र सफलता हैन । औला, खुट्टा, हात पुरै टुक्रिएर आएका विरामीलाईपनि भुईमा खसेको टुक्रा जोडेर पठाएका छन् । तर नेपालमै प्लाष्टिक सर्जरीमा यस्तो सफलता छ भन्ने चाही कमै मानिसलाई थाहा छ । त्यसैले मानिसहरु कमै उपचारका लागि पुग्ने गर्दछन् ।
रोगको भकारी मोटोपनाबाट मुक्त : दुई हप्तामा नै सुपर स्लिम बन्न सकिने यो उपाय [सबैको लागि सेयर गरौ]
काठमाडौ । जीऊ अस्वभाविक मोटायो ? बर्गर फुले झै झुलिस् भन्दै जिस्क्याउने बढे ? मोटोपन
चाहेजति धन र उच्च व्यक्तित्वको प्रगती चाहानुहुन्छ भने हेरक बिहान उठेपछि यी कार्य गर्नुहोस्
एजेन्सी । बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई
२० देखि ४० बर्षको उमेरमा हरेकमा आउने यी उछाल यसरी सामना गर्नुभयो भने जीवन सफल [सफलताको शुत्र]
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा २० देखि ४० वर्षको उमेर यस्तो समय हो जुन समयमा
के तपाई शरिरमा अनावश्यक रौंहरु आएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमैं बसेर यसरी हटाउनुहोस
काठमाडौं । गर्मी महिना लागेपछि धेरै महिलाहरुको ध्यान स्विमिङ खेल्न जाने, स्लिभलेस र स्कर्ट लगाउने
यो दशैं र तिहारको विदा कसरी सदुपयोग गर्ने ? [विज्ञहरुको टिप्स]
कक्षा ११को नतिजा भर्खरै प्रकाशित [नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गरौँ] अरुका लागि सेयर गरौँ
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि मुलुकभर ५७ हजार शिक्षक पुरा गर्न दरबन्दी पुनर्वितरणको तयारी
साढे एघार हजार शिक्षक अब यस्तो कार्बाहीको घानमा पिसिने निश्चित
कक्षा १२ को रिटोटलिङ्गको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
भारतसँग सिमामा हरदिन जुध्ने यी प्रहरी र नागरिकलाई सलाम : वीर गोर्खालीको हेर्नैपर्ने यो भिडियो
राजा प्रताप मल्लको इतिहास सिद्धाउने खेलमा विद्यासुन्दर शाक्य !
किन वर्षेनी सिमामा लुटिन्छन नेपालीहरु ? सरकारको मौनता कहिलेसम्म ?
अाेली सरकारलाई कुरीकुरी गर्दै पेटीकाेट अान्दाेलनकी सावित्रीले गरिन् कपाल मुण्डन !
विचौलियाहरुको अन्त्य गर्न अब सरकार आफैंले औषधिको मुल्य तोक्ने
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मिलन महासंयोगमा यी राशिको चम्कियो भाग्य: राशिफल/०७५ असोज ३१ गते बुधबार
वडादशैंको अवसरमा यी सहरका यी रुटमा सशस्त्र प्रहरीकापनि बस तथा एम्बुलेन्स निःशुल्क सञ्चालनमा
राष्ट्रिय गौरव नेपाली सेनाले यसरी गर्यो हर्ष बढाईँ [१७ तस्विर]
महाअष्टमी र कालरात्रि : महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको यसरी पूजा गर्दा बन्नेछ जीवन सफल